August 2015 | OKKALA STORE
ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် - Mi Sandi, Ni Ni Khin Zaw (...
Attack On Titan(2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
အခါတော်ပေးတာက ( မိုးအောင်ရင် + ဆန်းတိုးနိုင် + မို...
ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း နှင့် မိုက်တီး တို့ ပူးပေါင်း ရို...
Frozen Fever 2015 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
အွန်လိုင်းမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဗီယက်နမ် မော်ဒယ်...
Timeline 2014 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
PHYO PYAE SONE ( မျှော်နိုင်သမျှ မျှော် ) MP3 NEW ...
ဦးရဲ့အရုပ် ( ပြေတီဦး + ဆူးရှနိုင် ) မြန်မာဗီဒီယု...
မျိုးကျော့မြိုင် - လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေ (Feat: Wa...
ကမ္ဘာအပြင်းထန်ဆုံး ပြိုင်ဘက်များ Top 10 Football R...
Mother's Friend 2015 ( အကြည် )
အစွမ်းပေါ့ ( လူမင်း + အိချောပို + စိုးနန္ဒာကျော် ) ...
သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ...
လက်ချောင်းများ(Mp3 Lyrics Album)
အရမ်းကောင်းတဲ့ သီချင်း တိုက်တန်းနစ် Theme Song လေး...
American Pie မြန်မာစာတန်းထိုး
Tangled Ever After(2012)မြန်မာစာတန်းထိုး
Despicable Me 2:3Mini Movie Collection(2015)
ပုရိသတို့အား စုတ်ပြတ်သတ်သွားစေနိုင်သော ရွှေပိုးအိမ်...
Oh! Invisible Man - Oh!é€æ˜Žäººé–“ (2010) Full Mo...
The Dreamer 2003 ( Full Movie 18+ )
Funny Football Moments 2015 - Soccer Fails Funny M...
Top 100 Goals In Football History ● The Ultimate G...
Top 10 Unbelievable Own-Half Goals In Football His...
Ni Ni Khin Zaw - Bad Boy (2015 Myanmar Music Video...
ဆပ်စလူး နတ်ပူး ( ဖြိုးငွေစိုး + ရွှေမှုန်ရတီ )
သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာ စင...
၅၀ ကျော် အချစ် ( ဖြစ်ရပ်မှန် Movie ) မလိုချင်ပါကေ...
နိဗ္ပာန် တက် နေ တုန်း ရုတ် တရက် ဆွဲ ချ ခံ ရသ လို ပေ...
Purpose of Reunion 2015 ( Korea Love New Movie 18+...
Flowers and Birds Basket 2014 ( Korea Love Movie ...
City of Ember (2008)မြန်မာစာတန်းထိုး
အဆိုတော် မာရီယာ ကရေး ၏ အလှဓာတ်ပုံများ
Terminator Genisys (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
ရေဘေးသင့်ဒဏ်ခံနေရသော်လည်း ယခုအချိန်ထိ မပြောင်းရွှေေ...
(Myanmar Hot Music Video)✮ Than Yaw Zin Lat Kyan ✮...
(Myanmar Music 2015 ) Myo Kyawt Myaing, Ba Gyi Phy...
He` Lay - Miss တုပ်ကွေး‣ New Myanmar Songs 2015
Model ရွှေပိုးအိမ် ( လန်ထွက်လို့ လျှံထွက် သွားသော ပ...
Lin Lin - Dream of 60 million (4th Revolution Sin...
အရမ်းလှတဲ့ ပယ်နယ်တီ box ထဲက free kick တွေ ၀င်တဲ့ဂိ...
ပထမဆုံးအကြိမ် ကွန်ဒုံး ၀ယ်ခြင်း ဟီးး အသေရီရတယ် :)
SMS တစ်စောင်ပို့လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ် SMS ပို့လိုက်တဲ့...
နှင်းဆီအငြိမ့် ( ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ရန်ပုံေ...
စိတ်နဲ့လူ(Mp3 Lyrics Single Album)
တိုရှည် ( မြင့်မြတ် + ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ) မြန်မာဗီဒီယု...
Perfect Partner (2011) မြန်မာစာတန်းထိုး(18+) - ကေ...
I Like Sexy Women3(2015) HDRip 720p
ဂေးတို့၏ မာယာ (၂ ) မိုးအောင်ရင် + ခင်လှိုင် + ဒိန်း...
ရပ်ကွက်ထဲမှာပါ ( Love EBOOK ♥ )
ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် - Mi Sandi, Ni Ni Khin Zaw (New Myanmar Song 2015)
Posted by okkala net at 6:13 PM No comments: Links to this post
ဒီကားကို မကြည့်ခင် အရင် ဆုံးပြောချင်တာက ဇာတ်ကားပြီးလို့ စာတန်းထိုးပြီးတဲ့ထိ ပြီးဆုံးအောင်
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၁၀၀ ကျော်က ပေါ်လာတဲ့ လူသားစားတဲ့ တိုက်တန်တွေ..
တိုက်တန် တွေကို ကြောက်လို့ နံရံ မြင့်ကြီးတွေ ထဲမှာနေနေရတဲ့ လူသားတွေ..
တိုက်တန်တွေကို အယုံ အကြည် မရှိခဲ့တဲ့ အဲရန် နဲ့
သူငယ်ချင်း လူကြောက်လေး အာမင်..
ပြီးတော့ အဲရန်ပြောသမျှ ယုံကြည်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး မီကာဆာတို့ ..
နံရံ ကြီးတွေရဲ့ အပြင် ဘက်ကို ထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ တစ်နေ့မှာ....
တိုက်တန်တွေ ပေါ်လာပြီး လူသားတွေ တိုက်ခိုက် ခံကြရပြီးတဲ့ နောက်မှာ
အဲရန် အာမင် နဲ့ မီကာဆာ တို့ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ သွားကြမလဲ ဆိုတာရယ်...
တိုက်တန်တွေ ကို တိုက်ခိုက်ကြတာတွေ သေကွင်းသေကွက်တွေ က တကယ်ကို
ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် (18+ Rated ကားဖြစ်ပါတယ် သေတာတွေ ကြမ်းလို့နော် )
ဒီကားဟာ ဂျပန် Animation ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာလဲ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်
( ဒီကားကို ရုံတင်တုန်းက လက်မှတ်မရလို့ ရုံးလစ်ပြီးကို သွားကြည့်ပါတယ် )
Anime ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ ဒီကားဟာ Anime ကို မမှီဘူးလို့ ပြောကြပါလိမ့်မယ်
Anime ဗားရှင်းထဲက မီကာဆာရဲ့ ကာရိုက်တာဟာ Live-Action Movie ထဲက ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝကို ကွဲပြားနေတဲ့ အချက်လဲ ပါပါ လိမ့်မယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Animated လုပ်ထားကားကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ရတာ လွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး
နောက်ပြီး ဒီကားထဲက အဓိက ဖြစ်လာမဲ့ တိုက်တန်ကို သရုပ်ဖော်ထားတာလဲ တော်တော် ကို ကြည့်လို့ ကောင်းတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
Posted by okkala net at 12:47 AM 1 comment: Links to this post
အခါတော်ပေးတာက ( မိုးအောင်ရင် + ဆန်းတိုးနိုင် + မိုးယုစံ + မေမြတ်နိုး ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 10:10 PM No comments: Links to this post
ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း နှင့် မိုက်တီး တို့ ပူးပေါင်း ရိုက်ကူးပေးနေတဲ့ "ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ" NLD ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကွင်းမှ အနုပညာရှင်များ
Posted by okkala net at 3:57 AM No comments: Links to this post
တကယ်တမ်း Short Movie အနေနဲ့ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး ၈ မိနစ်စာပဲ ရှိပေမယ့် တစ်ခြား Animation Cartoon ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ Short Movie တွေလို မဟုတ်ပဲ ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲ ပျော်ရွှင်မှုလေး တကယ်ရပါတယ်
Elsa နဲ့ Kristoff တို့ ရဲ့ Anna အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် မွေးနေ့အစီအစဉ်လေး ပြုလုပ်ပုံလေးက အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေပါတယ်.. ဒီအပိုင်းတိုလေးအတွင်းမှာ အန်နာ နဲ့ အလ်ဆာ တို့ ရဲ့ ၀တ်စုံဒီဇိုင်းကို သတိထားကြည့်ပါ အတော်လေးကို ထူးခြား လှပနေပါတယ်... အိပ်ပျော်နေတဲ့ အန်နာ ကို အလ်ဆာ က သွားနှိုးလာပြီး အ၀တ်အနီစကြိုးလေး တစ်ကြိုးကို ဆွဲခိုင်းကာ တောက်လျှောက် လက်ဆောင်လေးတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုပေးပါတယ် အဲ့ဒီ လမ်းတစ်လျှောက်လဲ အအေးမိနေတဲ့ အလ်ဆာ တစ်ယောက် တစ်ခါ နှာချေလိုက်တိုင်း တစ်ခါ နှင်းကောင်ပေါက်စ လေးတွေ ၂ ကောင် ၃ ကောင် ၅ ကောင်ဆီ မသိမသာ ထွက်ကျလာပါတယ်…
အန်နာ ရဲ့ မွေးနေ့ ပါတီ အခန်းအနား ထဲသို့ ထိုကောင်လေးများ ရောက်ရှိသွားပြီး မွေးနေ့ ပါတီပြင်ဆင်နေတဲ့ Kristoff တို့ အဖွဲ့ကို သွားနှောက်ယှက်ပါတယ်... အအေးမိပြီး ဖျားနေတဲ့ အလ်ဆာ တစ်ယောက် အန်နာကို ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့မလား ရေခဲကောင်ပေါက် လေးတွေကပဲ မွေးနေ့ပွဲကို ဖျက်စီးပြစ်မလားဆိုတာ ကျနော်တို့ ၈ မိနစ်စာပဲ ရှိတဲ့ Frozen Fever ဆိုတဲ့ Short Movie လေးမှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Posted by okkala net at 3:50 AM No comments: Links to this post
အွန်လိုင်းမှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဗီယက်နမ် မော်ဒယ် မင်းသမီးလေး Nguyen Tran Huyen My ပါ
သူမရဲ့မွေးနေ့ က 11/12/1995 ဖြစ်ပြီး အရပ်အမြင့်က 1m75 ရှိပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား 83-62-93 ရှိပြီး Selfie ရိုက်ရတာ ဝါသနာပါသလိုချဲလ်ဆီး ပရိတ်သတ်ဖြစ်ပါတယ်
ချင်းမိုင်မြို့လေးမှာ စတော်ဘယ်ရီခင်း နဲ့ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်လေး
တစ်ရက်မှာတော့ ထိုစုံတွဲလေးဟာ ဘက်ပဲ့သွားတယ် အမျိုးသမီးရဲ့ ချစ်လှစွာသော
ခင်ပွန်းဟာ လူလောကကြီးနဲ့ သူချစ်လှပါတဲ့ မိန်းမ ဖြစ်သူကို ခွဲခွာသွားခဲ့တယ်...
ခင်ပွန်းကို ချစ်လှတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ တစ်အိုးတစ်အိမ် ထပ်မထူထောင်ပဲ
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သားငယ်လေး ထန် ကို ကြီးပြင်းတဲ့အထိ မိန်းမသား တစ်ယောက်ရဲ့
ခွန်အား နဲ့ ရုန်းကန် ကျွေးမွေး ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်....
တစ်နေ့မှာတော့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သားလေး ထန် ဟာ မိဘ ရဲ့ အရိပ်ကို
စွန့်ခွာပြီး ဘန်ကောက်မြို့ကို ကျောင်းသွားတက်ပါတော့တယ်...
နယ်မြို့လေးမှာ အမေ တစ်ယောက် သူ့ကျောင်းစရိတ်အတွက် ဘယ်လို ရုန်းကန်နေလဲ
ဆိုတာ ထန် တစ်ယောက် ဂရုမပြုမိပါဘူး အမေဆီ ဆက်သွယ်တိုင်း သူလိုချင်တဲ့
ပစ္စည်းတစ်ခု မဟုတ်ရင် ပိုက်ဆံတွေကိုသာ မှာလေ့ရှိပါတယ်..
အမေဖြစ်သူကတော့ သူ့သားလေး ကျန်းမာစွာနေဖို့နဲ့ အသံလေးကြားဖို့သာ
ထန် တစ်ယောက် မြို့ မှာ တက္ကသိုလ် တက်ရတဲ့ အခါ ဖရက်ရှာဝဲလ်ကမ်း မှာ
ဂျွန် ဆိုတဲ့ ပျော်တက်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ စတင် တွေ့ရပါတော့တယ်..
ထန် ရဲ့ စိတ်ရင်းလေးကို ချစ်မိသွားတဲ့ ဂျွန် တစ်ယောက် ထန် အတွက် အမြဲလိုလို
ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ် သူမလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ထန်အတွက် ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တယ်
သူ့ဘ၀ မှာ အချစ်ဆုံး ချစ်သူအဖြစ် တိတ်တခိုး ချစ်မိပြီး သူတို့ နှစ်ယောက် အမှတ်တရ
မွေးစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခွေးလေး ကပေါင် နာမည်နဲ့ Facebook မှာ အကောင့်အသစ် ဖွင့်ပြီး
သူခံစားနေရတာတွေကို Time Line မှာ အမြဲတမ်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်...
ထန် ဂရုမစိုက်တာတွေ ဂျွန်ကို အလေးမထားတာတွေ နဲ့
ထန် ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာတွေ အတွက်ပေါ့...
အရမ်းချစ်တက်တဲ့ ကောင်မလေး ဂျွန် ကို ထန် တစ်ယောက် အနီးမှာရှိနေလို့
မမြင်မိပဲ သာယာတဲ့ နောက် လိုက်နေတက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ အစ်မယွန် ကိုသာ
အစွဲကြီး စွဲမိပြီး ယွန် ရဲ့ အချစ်ကိုသာ ရဖို့ ထန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်...
ဒီလိုနဲ့ ထန် တစ်ယောက် သူ့ကို ချစ်တဲ့ အမေ နဲ့ ဂျွန် တို့ ရဲ့ မေတ္တာတွေကို
ဂျွန် ကလဲ စိတ်နာပြီး ဂျပန် ကို ပညာတော်သင် ထွက်သွားပါတော့တယ်...
ထန် အမေ ဖြစ်သူမှာလဲ နယ်မြို့လေးမှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပြီး
ထန် တစ်ယောက် သူ့အပေါ်ထားတဲ့ တကယ့်အချစ်စစ်တွေကို
စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ထန် ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ဂျွန် နဲ့ ရော ဆုံနိုင်မှာလား
နယ်မြို့လေးက အမေ ရဲ့ ကျေးဇူးကို ရော ပြန်ဆပ်နိုင်မှာလား...
သိချင်ရင် ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုသာ Download ဆွဲကြည့်လိုက်ပါ...
အောက်ဖော်ပြပါ လင့်တွင် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်
Posted by okkala net at 9:46 PM No comments: Links to this post
သီချင်းတွေ အားလုံး ဂွတ်တယ် အကြိုက်ချင်းတူရင် ရင်ခုန်နိုင်ပါတယ်
အချစ်ဦး Feat - Jewels နဲ့ ဆိုထားတဲ့အပုဒ်လေးကို တင်ပေးထားပါတယ်
Posted by okkala net at 8:38 PM No comments: Links to this post
ဦးရဲ့အရုပ် ( ပြေတီဦး + ဆူးရှနိုင် ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 4:53 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 12:44 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 12:36 AM No comments: Links to this post
မျိုးကျော့မြိုင် - လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေ (Feat: Wai Hnin)
Posted by okkala net at 4:12 AM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာအပြင်းထန်ဆုံး ပြိုင်ဘက်များ Top 10 Football Rivalries ● Most Dangerous Rivalry ● Old Firm, El Clasic...
Posted by okkala net at 9:43 PM No comments: Links to this post
OKKALA ပရိသတ်များအတွက် လုံးဝ ရှယ်ကား ..ကြည့်ပြီးသွားပြီးမို့ လုံးဝ ကောင်းတယ်လို့အာမခံပါတယ်
Posted by okkala net at 8:28 PM3comments: Links to this post
အစွမ်းပေါ့ ( လူမင်း + အိချောပို + စိုးနန္ဒာကျော် ) မြန်မာဗီဒီယို ဇာတ်ကားသစ်
Posted by okkala net at 7:34 PM No comments: Links to this post
သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ အတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေ Iron Cross ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ
Posted by okkala net at 2:57 AM No comments: Links to this post
တေးဆို ။ ။ မနော ၊ လှိုင်ဦးမော်
အရမ်းကောင်းတဲ့ သီချင်း တိုက်တန်းနစ် Theme Song လေး
Posted by okkala net at 1:08 AM No comments: Links to this post
ကဲ.....ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဆန်ဆန် ဇာတ်ကားကြိုက်နှစ်သူပရိတ်သတ်တွေအတွက်
American Pie ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် ကျောင်းသားဟာသဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း (၈) ကားရှိပါတယ်။ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား မဆက်စပ်ဘဲ ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်
ခြားခြားပြီးတော့ မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ (၈) ကားလုံးတင်ပေးသွားပါ့မယ်။
ဒီနေ့ကတော့ No(1) ဇာတ်ကားပေါ့။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ထွက်ပါတယ်။
အားပေးမှုတော်တော်လေးရရှိခဲ့ပြီး IMDb Rating (7/10) ရရှိထားလို့ Comedy အမျိုးအစားဇာတ်ကားတွေထဲမှာ Rating မြင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
အနောက်တိုင်း လူငယ်တွေရဲ့ စူးစမ်းမှု နဲ့ အရွယ်ရောက်လာမှုကြောင့် ဖြစ်ပျက်တတ်တာလေးတွေကို
ဟာသရောနှောပြီး အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပွင့်လင်းစွာ တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိသားစုနဲ့တော့ မကြည့်သင့်ပါဘူး။
Posted by okkala net at 1:05 AM No comments: Links to this post
ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးက အရင် Tangled ကားလေးရဲ့ အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်...ပထမကားမှာ ရာပွန်ဇယ်နဲ့ ယူဂျင်းတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပေမဲ့ လက်မထပ်ရသေးပါဘူး...ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲအကြောင်းလေးကို ထပ်မံဖြည့်စွက် ရိုက်ကူးထားတာလေးပါ...ကြည်နူးစရာကောင်းပြီး ရာပွန်ဇယ်ရဲ့ တောက်တဲ့လေးနဲ့ မြင်း မက်စီမက်စ်တို့ နှစ်ကောင်ရဲ့ အလွဲလေးတွေ စွန့်စားခန်းတွေကို ဟာသအနေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်... ပြသချိန် ၆ မိနစ်ခွဲလောက်ပဲကြာပေမယ့် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးဟာ ကြည့်ရကျိုးနပ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်... ခံစားအားပေးကြပါဦး..
Posted by okkala net at 1:02 AM No comments: Links to this post
ဒီနေ့ ဘာဇာတ်ကားအသစ်ထွက်လဲ လျောက်မွေရင်းနဲ့ Despicable Me2အဆက်ဖြစ်တဲ့ Minion Short Film ၃ကား တွေ့လို့ ဆွဲကြည့်တာ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။ ရယ်လဲ ရယ်ရတာမို့ CMက အမျိုးတွေလဲ ကြိုက်ကြမယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၅တောင်မှ ဒီနေ့မှ ထွက်တာမို့ စာတန်းထိုးဖိုင်တော့ မရသေးပါ။ ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ ဘာစာတန်းထိုးမှ မပါလဲ Minionsတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပုံနဲ့တင်ကို ကြည့်ရတာ တန်လွန်းပါတယ်။ Minions (2015) အကြည်မထွက်သေးခင်တော့ ဒါလေးနဲ့ အပန်းဖြေထားလိုက်ကြပါဦး။
Posted by okkala net at 1:01 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:52 AM No comments: Links to this post
Posted by okkala net at 3:41 AM No comments: Links to this post
ပုရိသတို့အား စုတ်ပြတ်သတ်သွားစေနိုင်သော ရွှေပိုးအိမ် ရဲ့ ဓာတ်ပုံများ
Posted by okkala net at 6:17 AM No comments: Links to this post